पोखरा थिएटरको उद्घाटन आज, आजदेखिनै नाटक ‘सिरुमारानी’ मञ्चन हुने - Pokhara News
होमपेज/गण्डकी/पोखरा थिएटरको उद्घाटन आज, आजदेखिनै नाटक ‘सिरुमारानी’ मञ्चन हुने
आज फागुन २ गतेदेखि प्रदेश नं. ४ को पहिलो नाटकघर पोखरा थियटर औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । थिएटरको राष्ट्रिय स्तरका नाट्यकर्मीको उपस्थितीमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रविन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्ने थियटर अध्यक्ष परिवर्तनले जनाए ।
थिएटर उद्घाटन समारोहमा वरिष्ठ नाट्यकर्मी सुनिल पोखरेल, कलाकार दयाहाङ राई, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त्त श्रेष्ठ लगायत सहभागी हुदैछन् । दिउँसो ३ बजे थिएटरको उद्घाटनसँगै साँझ पौने पाँच बजेबाट बहुप्रतिक्षित नाटक ‘सिरुमारानी’ मञ्चन हुनेछ । यो नाटक मञ्चन सँगै थियटर हलमा बसेर नाटक हेर्ने पोखरेलीको वर्षाेदेखिको सपना पुरा हुनेछ ।
नाटक फागुन २ गतेबाट फागुन १५ गतेसम्म हरेक साँझ पौने पाँच बजेबाट मञ्चन हुनेछ । शनिबार र विदाको दिन दिउँसो १ बजेबाट अतिरिक्त सो समेत हुनेछ । नाटक हेर्न तीन सय र पाँच सय दरको टिकट काट्नुपर्नेछ । विद्यार्थीको हकमा एक सय दरको टिकट लाग्नेछ ।
पोखरा थियटरको पहिलो ब्याचका नवप्रवेशी कलाकारहरुलाई मण्डला थियटरका व्रिmयटिभ डाइरेक्टर राजन खतिवडा, मण्डलाका अध्यक्ष तथा कलाकार दयाहाङ राई, कलाकार बुद्धि तामाङ, सोमनाथ खनाल, सुदाम सी. के., विकास जोशी, खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, श्याम खड्का, सरुभक्त, प्रकट पगेनी ‘शिव’, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, धनबहादुर गायक, प्रमिला तुलाचन, रमेश श्रेष्ठ, विष्णु नेपाली, मनोज गुरुङ, गनेस पौडेल, रुपिन्द्र प्रभावीलगायतले अभिनयका विभिन्न शैलीबारे सहजीकरण गरी उनीहरुको अभिनयमा निखारता प्रदान गरेका छन् ।